Profaịlụ extrusion aluminom na -ere ahịa maka onye na -ejikwa oriọna LED onye nrụpụta ụlọ na onye na -eweta ngwaahịa | Xingyong
Profaịlụ ịgbatị alumini maka ụlọ na -ejide oriọna oriọna LED
Ka ọtụtụ ndị mmadụ na -a attentiona ntị na nchekwa gburugburu ebe obibi, a na -eji profaịlụ alloy aluminom n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, dị ka bezel anyanwụ, oriọna LED, bracket LED, ụlọ LED. Aluminom alloy dị nfe ma e jiri ya tụnyere ihe igwe ndị ọzọ, a na -echekwa elu nke ihe nkiri aluminom oxidized site na ihe nkiri anodizing iji guzogide mmebi. Mgbe anodizing, elu nke alloy aluminom dị larịị, mara mma ma dịkwa mfe ịgbakọta na ogwe ọkụ plastik. Enwere ike nwetaghachi ma rụgharịa ihe nke aluminom a tụfuru atụfu, nke na -ebelata ihe mkpofu ma na -enye ụwa ibu arọ.
Product aha: Profaịlụ ịgbatị alumini maka ụlọ na -ejide oriọna oriọna LED
Ekweghị ekwe: 14 HW ma ọ bụ omenala
Ọdịdị: Ogwe nwere uzo
N'elu Ọgwụgwọ: Anodizing
ihe nkiri anodizing 6-12 um, ma ọ bụ omenala
Dayameta dị n'èzí Ogologo 116 mm
Wall ọkpụrụkpụ: 0.9mm
Ogologo: 1200mm, ma ọ bụ omenala
Ngwa: Ọkụ oriọna, ụlọ obibi ọkụ
Mgbe anodizing, profaịlụ aluminom nwere ike kpughere n'ikuku. Ihe nkiri anodizing na elu profaịlụ aluminom nwere ike igbochi nzere ma hụ na alloy aluminom agaghị abụ oxidized na nkwarụ na ikuku.
Naanị onye ọrụ kwesịrị ịhazigharị oghere, tinye akụkụ plastik n'ime oghere kwekọrọ na profaịlụ aluminom, wee jiri nwayọ pịa, wee chikọta ya. Mgbe ị na -ekesa ihe na -enwu enwu, wepu kposara ma mịgharịa profaịlụ aluminom na ntụnye oghere a ga -ekesa ya.
A ga -etinye profaịlụ aluminom site na akpa poly ma ọ bụ EPE iji kpuchido ihe nkiri aluminom, wee tinye ya na katọn, ma ọ bụ kechie ọtụtụ iberibe ka ọ bụrụ otu, wee jiri akwụkwọ Kraft tinye ya. Mgbe nke ahụ profaịlụ aluminom enweghị ike imebi n'oge njem.
Nke gara aga: OEM Omenala dị ala Aluminom Welding Wire Factory Quotes - Aluminom Welding Wire ER4043 - Xingyong
Osote: Aluminiumzingzing Round Tube Maka Dustpan